Gary Neville Oo Tilmaamay In Marko Arnautovic Uu Isku Maleeyo Cristiano Ronaldo & Xiddiga West Ham Oo U Jawaabay | Ciyaarside.com
Gary Neville Oo Tilmaamay In Marko Arnautovic Uu Isku Maleeyo Cristiano Ronaldo & Xiddiga West Ham Oo U Jawaabay
Nov 11, 2017 - Aragtiyood
Ka dib markii ay West Ham guuldarada 3-0 ka soo gaartay kooxda Brighton, Gary Neville oo khabiir isboorti ka ah Sky Sports ayaa kala dhantaalay saxiixooda ugu qaalisan Marko Arnautovic oo uu ku eedeeyay inuu isku maleeyo inuu yahay Cristiano Ronaldo.
“Waxaan abid kaliya la ciyaaray hal ciyaaryahan oo fasax laga siiyay inuu gadaal u soo dego oo uu kubada difaacdo waana Cristiano Ronaldo” ayuu yiri Neville. “Laakiin Cristiano waxa uu dhaliyay 40 gool xilli ciyaareedkii.
“Ninkaan Arnautovic waxa uu isku maleyaa inuu yahay Ronaldo. Waana taas dhibaatada, waxa uu isku maleyaa inuu ka fiican yahay sida uu yahay.”
Arnautovic ayaan hadaladaas si sahlan u qaadanin, iyadoo xiddiga 24ka milyan ginni ugu fadhiya West Ham uu dib isaga weeraray Neville isagoo ku maadeystay waqtigii uu Neville ku fashilmay shaqada tababare ee kooxda Valencia.
“Waan ixtiramayaa heerkii uu gaaray Garry Neville intii uu ciyaaryahanka ahaa. Waxa uu cajiib ku ahaa Manchester United waana ku ixtiraamayaa taas” ayuu xiddiga reer Austria u sheegay warbaahinta Laola1.
“Laakiin muxuu qabtay markii uu tababare ka ahaa Valencia? Shaqadiisa waxa ay tahay inuu wax dhaleeceeyo, waa boqolkiiba 90 shaqadiisa inuu wax dhaleeceeyo.
“Ma dhahayo Garry Niville waxba ma ahan. Wax badan ayuu qabsaday noloshiisa, waana halyeey. Laakiin tababare ahaan?